घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू नाइजेरियन फुटबल खेलाडीहरू यसका लागि उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल कथालाई प्रस्तुत गर्दछ जुन सर्वनामले उत्कृष्ट नामले चिनिन्छ; "पादरी"। हाम्रो Taribo पश्चिम बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले उल्लेखनीय घटनाहरु को एक पूरा खाता ले आफ्नो बचपन को समय देखि पुरा समय लाता छ। यो प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन, अनुष्ठान कथा, कसरी उनी एक पादरी बन्यो र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्याङ्क धेरै भन्दा पहिले उनको गिरोह को जीवन कथा को बारे मा छ।
हां, सबैले उनको रौतहट केशियरिङ र भव्य टेकल्सको लागि तिनलाई सम्झाउँछन्। यद्यपि, केवल एक हात केही प्रशंसकहरू Taribo पश्चिमको जैवको बारे धेरै जान्दछन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Taribo पश्चिम मा 26 मार्च 1974 मा पोर्ट हार्कोर्ट, नाइजीरिया मा जन्म भएको थियो। धेरैजसो जवान नाइजेरियनहरू किशोरीको रूपमा लागोस लाग्छन्, त्यसैले पश्चिम गरे। जब यो लागोस पुग्यो, वेस्टोमू जिल्लामा मृत-अन्त कार्यहरूको एक श्रृंखलालाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरिसकेपछि खतरनाक, गिरोह-स्खलित स्लम जसले पश्चिम ब्रोंक्स, न्यू यर्क शहरको तुलना गर्दछ। उनको शब्दहरुमा ...
'स्थानीय गिरोह क्षेत्र केटाहरूको रूपमा चिनिन्थ्यो। तपाईं या त तिनीहरूसँग वा उनीहरूको विरुद्धमा थिए, र मैले सोचे कि यो उनीहरु दुश्मन भन्दा साथीको रूपमा अझ राम्रो हुनेछ। ब्रेक-इन, लडाइँ, ड्रग्स र मगिङ्गहरू दिनको आदेश थिए। हामी अचानक मानिसहरूलाई सडकमा गाईरहेछौं। '
पश्चिम लागी लागोसमा अपराधको आय को लागी त्यो एक संस्कृत थियो। उनले सडक फुटबल खेल्दै आफ्नो लोकप्रियतालाई बलियो बनायो। अनि त्यसपछि ... एक दिन, उनी र उनको सबैभन्दा असल साथीले चोरीको पैसा बगाएपछि सडकमा फर्केर आए, उनीहरूले प्रतिद्वन्द्वी गिरोहको सदस्यले सम्पर्क गरेका थिए, जसले नगद माग्यो। मोनिजहरुमा यो प्रतिद्वंद्वी गिरोह संग लडने पछि। पश्चिमको साथीले पैसाको थलोमा हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्यो। उनले सडकमा आफ्नो साथी वेस्ट बेयरलेसको साथ सडकमा मृत्यु गर्न उनीहरूलाई सहयोग पुर्याए।
टार्बोबा वेस्ट मोनिजसँग भागे र पोर्ट हर्कोर्ट मा आफ्नो आमा फर्किनुभयो। गोरखावादको बदसूरत पक्ष देखेर, उनले फुटबलमा पूर्ण ऊर्जा समर्पित गर्ने निर्णय गरे।
पोर्ट हर्कोर्टमा, ओबाटा युनाइटेडसँग भिसा सुरु भयो। स्थानीय टूर्नामेन्टहरूमा प्रशंसकहरू मनपराउन पछि पछि सोमबार सिन्कक्लेयरको एक स्काउटर जसले पत्ता लगाएको थियो कि उनको शर्क्स फुटबल क्लबको लागि खेल्न सकेन। उहाँ अगाडी 1989 मा Ob Obanta यूनाइटेड संग 1990 मा शार्क्स फिर्ता लौटने को लागि चलाइयो। शार्कबाट, यो 1991 को Enugu रेंजर्स को लागि खेल्न को लागी, 1992 मा जूलियस बर्जर मा शामिल होने देखि पहिले तल चित्र मा देख्यो।
प्रारम्भिक 1993 मा सफलतापूर्वक परीक्षण पछि, पश्चिमी फ्रांसीसी साइड एक्सरियर ले केटा रक्सक्स को नेतृत्व गरे। तीन वर्षपछि, उहाँ ओलम्पिक टोलीका सदस्य हुनुभयो जसले 1996 समर ओलम्पिकमा सुनको पदक जित्यो। पश्चिमले टूर्नामेंटको हरेक मिनेट मात्र खेले। उनको चमकदार ब्रैड्स नो नोन्स डिफेंडरको लागि ट्रेडमार्क बन्यो। यो एक कपाल थियो जुन तपाईं पिचको अर्को छेउबाट देख्न सक्नुहुन्छ।
तिनको कपाल चमत्कार गरेझैं, उनीहरूको कडा टेकलिंग र बर्सस्टर्मिंगले विशेष गरी जब उनी आफ्नो घरको देशमा खेल्न थाले।
ओलम्पिकले जितेपछि अन्तर मिलानले आफ्नो सेवाको लागि कल गरे। इन्टरनेटमा, उनले खेले डिएगो सिमीन AKA Cholo र रोनाल्डो लुइस नाजियो डे लिमा.
पश्चिम एक UEFA कप विजेता बन्यो जब उनले नार्जुरुरियन रक्षा लाइनको नेतृत्व गरे भने ट्राफी जित्नका लागी उनले नाइजीरियामा डच डाक्टरहरु संग प्रदर्शन गर्ने अनुष्ठानको माध्यमबाट आए।
इटालीमा सफलता पछि, पश्चिमले डर्बी काउन्टीमा एक सिजन खर्च गर्ने निर्णय गर्यो, उनीहरूलाई प्रिमियर लीगमा जर्मनीमा कैसेर्सलाउर्नन राख्न सहयोग पुर्याए। टार्बोको क्यारियर थियो जुन युरोपमा धेरै चोटि पछाडि ईरान, यहाँ सम्म पनि ईरान भयो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
1996 ओलम्पिकको नाइजीरिया खेलाडीको पछाडि, त्यहाँ एक ठूलो महिला वा प्रेमिका हो, वा यसो भन्छ। टारोबो वेस्टको लागि, नामको नाममा ग्लैमरस बैंकर प्रेमिका थिए- पछि अडिनेक जसले पछि आफ्नी श्रीमतीलाई विवाह गरे।
उनीहरूको विवाह समारोह असामान्य रूपमा एक चोटि भएको बेलामा प्रायः ग्लैमरस थियो। योजना र अतिथि सूचीले त्यहि अवधिमा आयोजित अन्य विवाह समारोहको एकताबाट अलग गर्यो। तथापि, उनीहरूले नप्लियल गाँठो बाँडेर तीन हप्ता पछि, जोडाले अलग पारेको थियो। यो आरोपको आरोप र अपमानजनकताको आरोपमा भयो।
विवाहमा तीन हप्ता, मिडियाले आफ्नो वैवाहिक कर्तव्यहरूलाई बेवास्ता गर्न आफ्नी पत्नीको ब्याट्रीमा सीमित नगर्ने अटोकको टारबोको पेन्टिच्युटले दावीको साथ जगाएको थियो। अर्कोतिर, Taribo विवाह विवाह को रूप मा एक शम को रूप मा, संदेह, घृणा र प्यार देखि निराश द्वारा plagued। उनीहरूले बेपत्ता भएका अतुनुक र वैवाहिक जीवनमा प्रतिबद्धताको कमीलाई पनि आरोप लगाए। यो एक समयमा आयो अटिनोक एक पटक लोकप्रिय बैंकर डेटिङ गर्ने अफवाह थियो जब नाइजीरिया मा एक लोकप्रिय बैंक मा काम गरिरहेको थियो।
दुई अजीब अनुहारको बीचको अंतर अपरिहार्य भए र उनी दुवै अदालतको तलाकका लागि जान लागेका थिए जुन जान लागेन। टारबोइ भनिन्छ जब उनको पुष्पलालले इटालीमा अर्को तहसम्म ल्याइरहेको छ, अतुनोक अर्को सम्बन्धमा चलेको छ।
तर,आकर्षण र बाबालोस प्रयोग गर्दै
पश्चिममा एक पटक मोमबत्तीहरू जलन र खेलकुद गर्नु अघि उसले चुच्चो डाक्टरहरूबाट प्राप्त जादुई पत्थरीहरू समात्न स्वीकार गरेको छ। उनले थप भन्न भने कि अधिकांश खेलाडीहरू र प्रशिक्षकहरूले सामान्यतया डच डाक्टरहरू प्रयोग गर्ने काममा नपरिन्छन्। जब ताना आयनिनाले नाइजेरियन पंच अखबारको लागि एक स्पोर्टिक संवाददातालाई सोध्नुभयो भने उनी एक फुटबलमा हुँदा एक्लै काममा संलग्न थिए, उनीहरूले सीधा जवाफ दिए। हो!. उनको शब्दहरुमा ...
"निस्सन्देह हाँ, मलाई थाहा छैन किन मान्छेहरूले आकर्षण संग उनीहरूको संलग्नताबारे कुरा गर्न अस्वीकार गर्छन्। फुटबलले धेरै शक्तियोंसँग गरेको छ। जब ठूला घटनाहरू छन्, तपाईं स्टेडियम हेर्नुहुन्छ, तपाईं मान्छे देख्नुहुन्छ, सबै प्रकारका चीजहरू चल्ने प्रशंसकहरू; जादुगर त्यहा छन्, voodooists त्यहा छन्। मेरो खेलकुद दिनहरूमा, जब म अनजान हुन्थे, म केहि गर्न प्रयोग गरें mallams र babalawos (पारंपरिक डाक्टरहरू) हाम्रो लागि आकर्षण बनाउन, जुन हामी (राष्ट्रिय) शिविरमा लाग्यौं। कहिलेकाहीँ यसले काम गर्यो, कहिलेकाहीँ यो थिएन।
केही क्लबहरूमा, प्रत्येक खेल अघि, राष्ट्रपति वा क्लबको नेताले तपाईंलाई खेल गर्न भाग्यशाली आकर्षण दिनेछ। तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो जूता वा मोजाहरू र खेल्न लगाउँछन्। यो तिनीहरूको अनौठो विश्वास हो; कि यसले उनीहरूको जित जित्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ केही कोचहरू छन् जुन सेनेगल, बर्किना फासो, जिरो वा यहाँ सम्म कि नाइजीरियाबाट अफ्रिकी जादूगर र सोथस्सेर्ससँग जोडिएको छ। यी व्यक्तिहरूलाई मञ्च खेल्न अघि खेलहरूको परिणामहरू प्रदान गर्न सल्लाह दिएका छन्। यी मानिसहरू अजीब चीजहरू देख्छन् र उनीहरूले उनीहरूको जादू र आकर्षणसँग बताउन सक्छन्, कस्तो मेल खानेको परिणाम हुनेछ। मानिसहरूले विश्वास गर्छन् र यसको प्रयोग गर्छन्। यसले यो विश्वास गर्नेहरूको लागि काम गर्दछ। मैले यसलाई देखे, मैले यसको अनुभव गरेँ, म यो खेलाडीहरूको साथमा थिएँ र मैले यो प्रयोग गरेँ। त्यसकारण, मानिसहरू किन यो इन्कार गर्छन्? त्यहाँ फुटबलमा आकर्षण र अनुष्ठानहरू छन्। यो अझै पनि अवस्थित छ। "
तर,उनी कसरी परिवर्तित भयो
जब पश्चिमको बहिनी प्रचारक हुनुभएको धैर्यको नाममा, मिलानमा आफ्नो नयाँ घरको एक आश्चर्य यात्रा गरे। पश्चिमले यसलाई राख्दछ;
'मैले ढोका खोलेँ, र मैले भन्नको लागि मौका पाएको छु कि म उसलाई हेर्न को लागी खुशी छु, उनले यसो भने:' तिमी यो जस्तै एक घर मा बलियो हुनु पर्छ। ' उनले मलाई बताए कि घरको खराब अनुहार थियो, र मैले कस्तो प्रकारको अनुयायी गरें। Taribo पश्चिम उनको बयान द्वारा क्रोधित भयो र उनले भन्यो ... "यदि त्यो मेरो बहिनी थिएन भने मलाई उनको चाडै हरायो।"
धेरै फुटबलरहरू जस्तै, उनी धेरै उत्साहजनक थिए। उनको बहिनी जो भगवानको स्त्री हो र उसलाई यसो भनिएको छ कि उनीहरूले भित्री ऊर्जा महसुस गर्न सक्थे र भन्यो कि उसले दुई कुकुर देख्न सक्थ्यो - एक सेतो र एक कालो - यो घर मा यो लडाइँ। यो तर्बोबोमा फुटबलर पछि यसो गर्दा थियो। उनीहरुका शब्दहरु द्वारा एकदम थोडा लाग्न थालेको थियो र छिट्टै उनलाई तिनको प्रशिक्षणमा रहनु भएको थियो। धीरजीले आफ्नो भाइलाई तालिम दिन नसक्ने काम गरिरहे। उनले आफ्ना भाइलाई रूपान्तरण गर्न भगवानलाई प्रार्थना गरिसके।
पश्चिम पश्चिम प्रशिक्षणबाट फर्केपछि तिनकी बहिनीले थप समाचारहरू गरेका थिए। त्यो बाहिर निस्क्यो, उनी सुतिरहेका थिए र शुद्धताको एक स्वर्गीय सपना थियो, टारोबो वेस्टलाई भन्नु भएको थियो कि परमेश्वरले उसलाई उनको बुद्ध मार्गबाट ​​टाढा पुर्याइरहेकी थिइन् जुन उनीहरूको बारेमा सपना देखेर उनीहरूलाई आफ्ना कामका नतिजाहरु को चेतावनी दिए।
'मैले एहसास गरें कि मलाई परमेश्वरको सहयोग चाहिन्छ,' पश्चिमको अन्तस्करणले उहाँलाई स्वीकार गर्यो। उहाँले आफ्नो बहिनी संग बिर्सेर र प्रार्थना शुरु गर्नुभयो। तिनीहरूले प्रार्थना गर्दा, घरको सबै दराज खोल्न थाले र आध्यात्मिक रूपमा बन्द। एक पटक टार्बो सम्झौता गरियो ...
'मैले सोधेँ कि यो केवल हावा हुन सक्छ, तर जस्तो कि जस्तो लाग्यो मेरो टाउकोमा प्रवेश भयो, सबै ढोकाहरू पनि हिँड्न थाले। यो खराब चलचित्रबाट केही चीज थियो, तर मलाई थाहा थियो कि यो वास्तविकता थियो. मैले भित्रको न्यानो भावना अनुभव गरें। " यो उनको बहिनी तिनलाई फर्काउँथे र यसो भने: "Taribo, प्रभुले तपाईंलाई एक पादरी हुनेछ भन्नुभयो"।
यो बेलामा उपनाम प्राप्त भयो 'पादरी' किनकि उनले सबैलाई भने कि उसलाई बोलाउन थाले। उनको बहिनीले लन्डनमा आधारित प्रचारकको टेप दिएका थिए, पास्ता इओ डन-डोडो, जसका उपदेशहरूले पश्चिमको विश्वासलाई पुष्टि गरे र तिनलाई स्थापित गर्न राजी गरे। तूफान सेवकाईमा आश्रय Affori मा, मिलान को एक उत्तरी उपनगर।
तर,सारांशमा Pastoral कर्तव्यहरू
आफ्नो बहिनीले रूपान्तरण गरेपछि, पूर्व नाइजीरियाका अन्तर्राष्ट्रिय डिफेंडरले तुरुन्तै शैतानलाई निषेध गर्न सुरु गरे र इटालीको इजरायलीको लागि फिर्ता कब्जा गरे।
टारबो वेस्ट ले लागोस लियोन नाइजीरियामा जानु अघि धेरै समय लागेन आश्रयमा चमत्कार चमत्कार खनिजries सबै राष्ट्रहरूको। जस्तो कि तपाई हुन सक्नु हुन्छ, तपाईं केवल कल्पना गर्न सक्नुहुन्न मारियो बाल्टोटेल घानामा एउटै बाटो पछ्याउँदै।
फुटबलबाट आफ्नो सेवानिवृत्त पछि पनि, तेरबोइले नाइजीरियाको सबैभन्दा कुख्यात शहर अजगुनले मा शक्तिशाली क्रसस (तल चित्रित) को आयोजन गरी निरन्तरता लिएका थिए जहाँ उनको उद्देश्य गिरिजाबाबुहरु लाई बदल्न को लागी उनको जीवन को पूर्व तरिका मा परिवर्तित भएको थियो। Taribo Ajegunle को सडकमा तीहरूको लागि एक स्थायी केन्द्र कोष गर्न $ 2million डलर बढाउन सक्षम भयो।
सबैलाई थाहा थियो त्यो धेरै उदार र भीडमा बोझिएको थियो। धेरै चोटि, क्रूससहरूका लागि विज्ञापनहरू सिर्जना गर्नुको सट्टा, Taribo तल प्रचार मा खुला रूपमा फोटोमा देखिए।
तर,दर्दनाक अन्तिम दिन
जनवरी 2007 मा, क्रोएशन् क्रोएशियाई क्लब रिजेका संग हस्ताक्षर गर्न नजिक थियो, तर उनको मेडिकल असफल भयो। उहाँ अन्ततः ईरान गए र अगस्त 2007 मा पेननसँग एक वर्षको सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुभयो। पश्चिमले क्लबसँग सुरू गर्न असफल भयो, आफ्नो सम्झौतामा सन्तुष्ट सहमतिले मात्र तीन महिना पछि बन्द गर्यो। फरवरी 2008 मा, पश्चिम कथित तौर मा दावा Segunda División क्लब Xerez, तर क्लबको अध्यक्षले उनको आगमनको कुनै ज्ञानलाई अस्वीकार गर्यो।
सेवानिवृत्ति पछि, पश्चिम ले भन्यो ...'म मिलन जान्छु र एक पेशेवर पादरी हुनेछु,' उस्ले भन्यो। 'म कोच हुन सक्दिन कुनै उपाय छैन। यो मेरो लागि फुटबलको अन्त्य हो ' उहाँ यसको विचारमा हँसिनुहुन्छ।
2010 मा, यो रिपोर्ट गरियो कि पश्चिम र अन्य नाइजीरिया अन्तरराष्ट्रीय, जस्तै जे जे जे ओकोचा, Nwankwo Kanu र Obafemi Martins, कम से कम सात वर्ष भन्दा पुरानो थिए उनीहरूले दावी गरे भन्दा। अप्रिल 2013, Žarko Zečević, पार्टीजनका पूर्व महासचिव, ले भन्यो कि पश्चिम आफ्नो दावी उमेर भन्दा 12 वर्ष भन्दा पुरानो छ। केही समयपछि, पश्चिमले आरोप लगाउन अस्वीकार गर्यो।
Zarko Zecevic सर्बियाई अखबार भन्नुभयो Vecernje Novosti: "[पश्चिम] हाम्रो साथमा 28 भन्न भन्नु भएको थियो। हामी पछि मात्र फेला पार्यौँ कि उनी 40 थिए, तर उनी अझै पनि राम्रो खेलिरहेका थिए, त्यसैले म उनीहरूलाई टोलीमा नफरत नगर्ने। "
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Taribo पश्चिम बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!.